Naagaha Jalaatada badsada Oo dareen dheeraad ah lagu arkay -Sirta Dumarka | Gaaloos.com
Home » galmada » Naagaha Jalaatada badsada Oo dareen dheeraad ah lagu arkay -Sirta Dumarka
Naagaha Jalaatada badsada Oo dareen dheeraad ah lagu arkay -Sirta Dumarka
Ilaa Intee indhaahagu qabteen gabar aad u xiiseeso jalaato? Masa gabar makaa codsatay in aad hore ugu soo iibiso jalaato?
Barteena arimaha Bulshada ee wacdaraha oo soo tarjumeeso daraasad ay soo saareen dhaqaatiir ku xeel dheer arimaha galmada iyo dareenka xaruntooda tahay dalka USA.
Dhaqaatiir kala ah Alan Hirsch, M.D., Neurolog and Director Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago ayaa sheegay in gabadha jalaatada cunta ay ka dareen badantahay gabadha aan cunin jalaatada, waana astaan lagu garto in ay tahay gabadhaas mid dareenkeeda uu aad badanyahay.
Daraasdaan oo lagu sameeyay dad gaaraya 720 qof da’dooda u dhexeesa 24-39 sano jir, daraasada ayaa lagu ogaaday in dumarka xiiseeya cunista jaalatada ay aad ugu dareen badan yihiin, daraasada ayaa tilmaamtay dumarka laqabo habeenka ay galmo karabaan
Title: Naagaha Jalaatada badsada Oo dareen dheeraad ah lagu arkay -Sirta Dumarka